Urur goboleedka IGAD oo war ka soo saaray arrimaha Galmudug – Hornafrik Media Network
Qoraal ka soo baxay Urur goboleedka IGAD ayaa si taxadar leh loogaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dowlad goboleedka Galmudug.
Ururka goboleedka IGAD oo aan si toos ah ugu hambalyeyn Madaxweynaha maanta lagu doortay Dhuusamareeb,hase yeeshee waxa qoraalka lagu cadeeyay in ururku uu si dhow ula socday siyaasada Galmudug.
“Waxaa uu ururka IGAD uu si weyn ula socdaa arrimaha Galmudug laga soo bilaabo shirkii IGAD ay qabanqaabisay ee ay ku heshiiyeen maamulka Galmudug iyo Ururka Ahlu-Sunna, taas oo horseeday in Ahlu-Sunna ay qeyb ka noqoto baarlamaanka Galmudug.”ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay IGAD ayaa lagu sheegay in ururku uu si weyn ula socday uuna ku ammaanayo qeybaha kala duwan ee arrimaha Galmudug iyo dowlada federalka dhisidii baarlamaanka Galmudug iyo weliba doorashadii maanta ka dhacday Dhuusamareeb.
IGAD ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada Galmudug inay iska ilaaliyaan wax kasta oo keeni kara rabshado carqaladeeya sharciga, kala dambeynta iyo amniga.
Sidoo kale waxay ku baaqeen in la xaliyo kala duwanaashaha, iyadoo loo marayo wada hadal, in ahmiyad la siiyo nabad dhisida iyo dib u heshiisiinta, si kor loogu qaado wada noolaanshaha iyo is dhex galka Galmudug.
Xildhibaan Axmed Fiqi oo jawaab kulul siiyey safiirka Mareykanka ee Soomaaliya